Xisbiyada UDUB iyo UCID oo qaaddacay go’aankii lagu laalay diiwaangelintii hore, dalbadayna in diiwaangelin cusub la sameeyo | Berberanews.com
Home WARARKA Xisbiyada UDUB iyo UCID oo qaaddacay go’aankii lagu laalay diiwaangelintii hore, dalbadayna...
Xisbiyada UDUB iyo UCID oo qaaddacay go’aankii lagu laalay diiwaangelintii hore, dalbadayna in diiwaangelin cusub la sameeyo
Hargeysa-(Berberanews)- Xisbiyada Mucaaridka Somaliland ee UDUB iyo UCID, ayaa kulan ay maanta la yeesheen xubnaha Guddiga doorashooyinka Qaranka ka dib, markii ugu horreysay kaga hadlay mawqifkooda ku aaddan go’aankii Golaha Wakiilladu ku laalay diiwaangelintii hore ee codbixiyayaasha doorashooyinka, isla markaana ay ku ansixiyeen in diiwaangelin la’aan lagu galo doorashada dawladaha hoose.
Masuuliyiin ka kala tirsan Xisbiyada UCID iyo UDUB oo ay ka mid ahaayeen Guddoomiyaha Siyaasadda Xisbiga UDUB Cali Maxamed Waran-cadde iyo Afhayeenka ku-meel-gaadhka ah ee Xisbiga UCID Maxamed Xasan Khayre (Shabaash), ayaa kulankaa ay maanta Guddiga doorashooyinka Somaliland kula yeesheen Huteel Crown ee magaalada Hargeyska markii ay ka soo baxeen Saxaafadda la hadlay.
Ugu horreyn Cali Waran-cadde oo waxyaabaha ay Guddiga doorashooyinka kala hadleen faahfaahinayaa waxa uu yidhi; “Haddaannu Xisbiyada UDUB iyo UCID nahay waxaannu kulan kala yeelannay Guddiga doorashooyinka nidaamka cusub ee immika socda, markaa annaga waxa noo muuqda nidaamka immika jiraa inuu yahay mid khalkhal badani ku jiro. Annagu markii hore waannu qabnay in diiwaangelintii hore ay ahayd mid khalad badani ku jiro oo aan doorasho labaad lagu gali karin, markaa waxaannu dalbannay in diiwaangelintaa la laalo, waxaannu-se waydiisannay in la qabto diiwaangelin cusub oo muddo lix bilood ah lagu qabto illaa sannad waannu ku heshiinnay.”
“Markaa, arrin kale ayaa ka daba timi, oo ah in bilaa diiwaangelin lagu galo, Komishankaannu weydiinnay oo nidhi waxani xagguu ka yimi, annagu maannaan wadan bay yidhaahdeen, markaa cid wadatay iyo goor Nairobi laga soo qaaday annagu ma garanayno…” sidaa ayuu yidhi Cali Maxamed Waran-cadde.
Waxaanu isaga oo hadalkiisa sii wata intaa ku daray oo uu yidhi; “Waxa muuqata inay masuuliyad-darro ay meesha ka jirto, markaynu eegno siday maanta u socdaan ururrada cusub ee la furayaa waa qaab khatar gelin karta dalkan oo kala nidaamintuudu khatar keeni karto. Maalin dhawayd waxaynu arkaynay iyada oo la leeyahay illaa Ururrada la diiwaangeliyo xafiisyo kama furan karaan gobollada oo isu soo baxyo olole ma samayn karaan, xalayna waxaynu arkaynay qaar sidoodii gobollada uga furanaya oo durbaanno tumanaya. Markaa, wer-werka jiraa waxa weeyaan Komishanka immika xukumi kari waayey afr urur oo cusub markay barrito labaatan urur noqdaan ee doorasho bilaa diiwaangelin ahi timaaddo awooddoodu maxay noqonaysaa?”
Warancadde waxa uu bulshada reer Somaliland ugu baaqay inay nabadgelyadooda ilaashadaan, waxaanu yidhi; “Waxaannu bulshada ugu baaqaynaa inay nabadgalyadooda ilaashadaan oo aanay nabadgelyadooda iyagaa ka masuul ah iskaga ciyaarin oo aanay saamaynin ururrada siyaasadda ee faraha badan ee qabaa’ilka ku salaysan. Waxaan idinkula talinayaa waxaad kala doorataan inay noqdaan laba qof oo aanay kala noqon labaatan qof iyo labaatan madaxweyne, waad arkaysaan waxa Soomaaliya ka taagan kon maamul-goboleed iyo konton madaxweyne ayey leeyihiin, innagana markii taa la innaga waayey waxa la doonayaa in la innoo furo Ururro qabii’il ah oo aynu kala raacno oo Urur waliba goor-dhaw uu UN-ka ka dalbado aqoonsi. Markaa, waxaan idinku dhiirrigelinayaa haddaad wax kala dooranaysaan inaad laba Madaxweyne kala doorataan.”
Sidoo kale, Afhayeenka Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Maxamed Xasan Khayre (Shabaash) oo isna halkaa ka hadlay ayaa yidhi; “Anigu arrinka rasmig ah ee aanu u soconay waxay ahayd xildhibaanadii ka baxay labada xisbi arrinkoodii ayaanu u soconay. Waxaana loo gudbiyey maxkamadda, maxkamadaanay komishanku yidhaahdeen kala socdaa.Ayuu yidhi Afhayeenka Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID Md Maxamed Xasan Khayre.
Afhayeenka UCID waxa uu intaa ku daray oo yidhi; “Tan diiwaangelinta lalaalay ama diiwaangelin la’aanta baarlamaanka soo jeediyey, dabcan koomishankuna shaqu leeyahay. Komishankuna inuu shaqadiisa qabsado weeye, muhiimada aanu u soconayna waxa weeye arrinta xildhibaanada.”
Previous articleCiidammo Itoobiyaan ah oo galay gudaha deegaanno dalka Soomaaliya ka mid ah
Next articleMid ka mid ah Wiilasha Col.qaddaafi oo u gacangalay dawladda ku-meel-gaadhka Libya iyo Boqor Buurmadow oo ka hadlay